Fandaminana teny Soamandrakizay :: Mitoroka an’ilay orinasa niandraikitra ny tsena ireo mpivarotra sakafo • AoRaha
Fandaminana teny Soamandrakizay Mitoroka an’ilay orinasa niandraikitra ny tsena ireo mpivarotra sakafo
Tondroin’ireo mpivarotra teny Soamandrakizay fa namitaka azy ireo ny orinasa izay niandraikitra ny fanomezana ny tsena nandritra ny hetsika teny an-toerana tamin’ny fandalovan’ny Papa Fransoa. Milaza ho matiantoka avokoa ireo mpivarotra nefa nandoa enina hatramin’ny valo hetsy ariary tamin’ny hofan’ny tranoheva nampiasaina.
Maro koa ireo mpivarotra nilaza ho niharan’ny fahasimbana ny fitaovana sy ny sakafo notehirizina tao anaty vata fampangatsiahana noho ny olana tamin’ny herinaratra.
« Nisy fitaka teo amin’ny fandaminana satria rakotra vovoka avokoa ny sakafo sy ny fitaovana nampiasaina, teny Soamandrakizay. Tsy araka ny zavatra nampanantenaina azy ireo no nitranga, toy ny fanondrahana rano sy famendrahana fanafody manokana tsy hampanidina ny vovoka teny an-toerana saingy tsy nisy akory izany”, hoy Ramaroson Tantely, mpisolovava an’ireo mpivarotra nandritra ny fivorian’ireo mpivarotra, teny Antaninarenina, omaly.
Nilaza ny hampiakatra ny raharaha eny amin’ny Fitsarana ireo mpivarotra manodidina ny roanjato mahery ireo raha tsy misy ny vahaolana avy amin’ilay orinasa. Nambaran’ireo mpivarotra rahateo fa efa nampanantsoina tao amin’ny fivoriana nataon’izy ireo ny tompon’andraikitra ao amin’io orinasa io fa tsy namaly ny antso.
Nanamafy kosa anefa ny avy ao amin’io orinasa io fa tsy marina ny fiampagan’ireo mpivarotra azy ho tsy mandray ny antso amin’ny finday natao azy ireo. Nisafidy ny tsy haneho hevitra kosa izy ireo manoloana an’ireo fiampagana maro be mihatra aminy sy ny filazana amin’ny fampiakarana fitsarana ny raharaha.
Trafikana rongony mahery vaika Nosamborina ny zandary iray miasa eny Ivato
Fanahiana famotsian’omby :: Nosamborin’ny Tafika ny delegem-panjakana iray
Fitorian’i SAMIFIN :: Manamboninahitra polisy iray hatolotra ny Fitsarana misahana ny kolikoly